राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी स्वैच्छिक कर सहभागिता बढाउन लागिपरेका छौं
अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई राजस्व चुहावट नियन्त्रण थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै डेढ वर्षअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत लगियो । प्रधानमन्त्रीले शक्ति सञ्चयका लागि राजस्व अनुसन्धानलाई आफू मातहत लगेको भन्दै त्यतिबेला आलोचना समेत भएको थियो । प्रस्तुत छ, यसबीचमा विभागले गरेका काम, मुलुकमा राजस्व चुहावटको अवस्था, नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयास लगायत विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार :
पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धान विभागले के गरिरहेको छ ?
विभागले खासगरी दुईओटा विषयमा आफ्ना कामकारबाही केन्द्रित गरेको छ । एउटा – आर्थिक सुशासन कायम गर्दै आर्थिक अपराध रोक्न, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न राजस्व चुहावटका कसुरमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको राय लिएर अदालतमा मुद्दा दायार गर्ने गरेको छ । ती कामकारबाहीबाट व्यावसायिक क्षेत्रका साथै आर्थिक कारोबार हुने बिन्दुहरूमा सकारात्मक प्रभाव पारेर सुशासन कायम गर्न र करको दायरा बढाउँदै स्वैच्छिक कर सहभागिता बढाउन विभागले जोड दिएको छ । दोस्रो काम भनेको विदेशी विनिमय अपचलन नियन्त्रण हो । यसबाट पनि आर्थिक अपराध हुने भएकाले नियन्त्रण गर्न विभागले अनुसन्धान गरी मुद्दा अघि बढाउने काम गरिरहेको छ ।
संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्वमा कहीँकतै गम्भीर ढंगले चुहावट हुन्छ भने त्यसको छानबिन, अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार राजस्व अनुसन्धान विभागलाई छ । क्षेत्रधिकारमा छानबिन अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ । तर निर्णय गर्ने अधिकार हामीलाई छैन । खासगरी सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान भन्सार राजस्वको हुन्छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र सो मातहतका कार्यालयले संकलन गर्ने मूल्यअभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्कको पनि ठूलो योगदान छ । ती करहरूको चुहावट न्यूनीकरणमा विभागले ध्यान केन्द्रित गरेको छ । भन्सार विन्दुबाट आयात–निर्यात गर्दा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कानून बमोजिम राजस्व प्राप्त भयो/भएन, त्यसमा चुहावट हुने खालका कुनै काम भएका छन् भने सूक्ष्म निगरानी राख्ने र अनुगनम गर्ने काम गरिरहेका छौं, जसले गर्दा विगतको तुलनामा राजस्व संकलनमा सुधार भएको देखिन्छ ।
अन्तःशुल्क, मूल्यअभिवृद्धि कर, आयकरमा राजस्व छल्नेमाथि विभागले के कसरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ?
अन्तःशुल्क, मूल्यअभिवृद्धि कर र आयकरमा गम्भीर ढंगले चुहावट गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करका झुटा बिलबिजक जारी गरेर सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने राजस्व दाखिला नगर्ने विगतको प्रवृत्ति अहिले पनि देखिन्छ ।
१३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर, २५ प्रतिशत आयकर लगायत कर छलीका गम्भीर प्रकृतिका घटना एवं आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म भएका ठूला घटनाको छानबिन, अनुसन्धान अहिले हामीले शुरू गरेका छौं । त्यसरी बिलबिजक जारी गर्ने २०० भन्दा बढी फर्मको पहिचान गरेर करीब १७० फर्मविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौं । बाँकीलाई मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रियामा छौं । ती फर्महरूसँग बिजकहरू खरीद गरेर राजस्व छली गर्ने ५५ ओटा विभिन्न फर्मको झण्डै ५ अर्बको बिगो मागदाबी सहित मुद्दा दायर गरिसकेका छौं । अरू अनुसन्धानका क्रममा छन् । त्यस्ता फर्महरूबाट १५ अर्बभन्दा बढीको बिलबिजक प्रयोग भएर राजस्व चुहावट भएको अहिलेसम्मको हाम्रो अध्ययनबाट देखिएको छ । अनुसन्धान गर्दै जाँदा यसमा वृद्धि हुने देखिन्छ ।
हामीले केही समयअघि पेप्सी उत्पादन गर्ने कम्पनी वरुण बेभरेजले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको अनुसन्धानबाट भेट्टायौं । १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी धरौटी तोकेर मुद्दा अघि बढाएका थियौं । अदालतले पनि त्यो धरौटीलाई निरन्तरता दिएर अहिले ‘वान अफ द डाइरेक्टर’लाई थुनामा राख्ने भनेको छ । करिब २ अर्ब असुल गरिपाऊँ भनेर हामीले मुद्दा दायार गरेका छौं । कुनै एउटा प्रकरणमा यतिधेरै राजस्व चुहावटका घटना आउँदा समेत कतैबाट अनुसन्धान प्रभावित नभई मुद्दा चलाइएको यो ज्वलन्त उदाहरण हो । त्यस्तै, अन्तःशुल्कमा नक्कली स्टिकर टाँस्ने गतिविधि अहिले पनि छ । यसमाथि पनि विभागले सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
भन्सार विन्दुमा हुने राजस्व छलीमाथि पनि अनुसन्धान चलिरहेको होला नि ?
भन्सारबाट विभिन्न छद्मभेषी फर्महरूमा आयात गर्ने र ती सामान व्यवसायीले लगेर विक्री गर्ने, तर उसले बिलबिजक नलिने र त्यो आयात गरेको आधारमा त्यसबाट बिलबिजक मात्रै विक्री गर्ने प्रवृत्ति देखियो । झूटा, नक्कली बिलबिजकको पहिचान गरेर अनुसन्धान अघि बढाएका छौं । केही अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गरिसक्यौं भने कतिपय अनुसन्धानकै क्रममा छन् । अनुसन्धानबाट यस्ता घटनामा अडिटर समेत संलग्न भएको पाइयो । एकजना अडिटरलाई अहिले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्दै छौं ।
भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) कार्यान्वयनको अवस्था के छ ?
व्यावसायिक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढाउन र कारोबार प्रवर्द्धन गर्न भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) ल्याइएको थियो । यो अहिले सूचना बैंकका रूपमा कार्यान्वयनमा छ । स्वैच्छिक कर सहभागिता बढाउन समेत यो प्रणालीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । यसमा कुनै पनि व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तुहरू दुवानी गर्नुभन्दा पहिला दुवानीका साधन र मालवस्तुको संक्षिप्त विवरण अनलाइनमा आधारित प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर मात्रै दुवानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन र अनुगनमलाई हामीले जोड दिएका छौं । त्यसभित्र रहेर पनि कसैले गलत काम गरेको छ भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका छौं । अहिलेसम्म भीसीटीएसको अनुगमनबाट हामीले ४ करोडभन्दा बढी जरीवाना समेत गरिसकेका छौं । यो सिस्टममा अहिलेसम्म सवा करोडभन्दा बढी थान बिजक प्रविष्ट भएका छन् । ६ लाख थानभन्दा बढी प्रज्ञापनपत्र र ३४ खर्बभन्दा बढीको तथ्यांक सिस्टममा आएका छन् ।
कपडा लगायत मालवस्तु चोरीपैठारी गरेर ल्याउने र अरूको पान नम्बरमा भीसीटीएस गरेर सामान काठमाडौंसम्म पठाउने र जुन फर्मको नाममा भीसीटीएस गरेर सामान आएको छ । तर त्यसले न त्यो सामान मगाएको छ, न त त्यो ‘लेभल’को व्यापार नै गर्छ । ती सामान विभिन्न अन्य सामानको व्यापार गर्नेले मगाएको हुने अनुसन्धानबाट भेटिएको छ । ८ लाख रुपैयाँको सामान खरीद गर्ने सामान्य पसलेको नाममा ८ करोड रुपैयाँसम्मको तस्करीको सामान भीसीटीएसबाट आएको देखिएको छ । तत्काल सिस्टमबाट पहिचान गरेर ट्रासपोर्ट कम्पनीको गोदाम सिल गरिएको छ । त्यो काममा संलग्न कर्मचारीलाई हिरासतमा लिइएको छ । त्यस्तो सामान लिएर कारोबार गर्ने कपडा व्यवसायीको गोदाम सिल गरेर अनुसन्धान गर्दै छौं ।
त्यस्तै, भर्खरै मात्र भारतबाट तस्करी गरेर ल्याइएको एक ट्रक चिनी हामीले नियन्त्रणमा लियौं । त्यहाँ हामीलाई भ्रममा पारेर नक्कली कारोबार गर्न खोजिएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । यस्ता कुराहरू भीसीटीएसबाट पत्ता लागेको छ । हामीले छानबिन जारी राखेका छौं । यो प्रणालीबाट वार्षिक ५० अर्बभन्दा बढी राजस्व परिचालन गर्ने स्थिति बनेको छ ।
भीसीटीएस कार्यान्वयनमा सफलता कसरी मिल्यो ?
हामीले बिजनेश र निजीक्षेत्रमैत्री प्रणालीको शुरुआत गरेका थियौं । यसबाट त्रसित हुनुपर्ने कारणै थिएन । अहिले निजीक्षेत्रले समेत स्वीकारेको अवस्था छ । हामीले व्यवसायीको व्यवसायमा कुनै पनि प्रकारको असजिलोपना यो प्रणालीबाट सृजना हुन दिएका छैनौं । यो निजीक्षेत्र, स्वच्छ व्यवसायी करदातामैत्री प्रणाली थियो र भोलि पनि रहनेछ । भीसीटीएस आफैमा राजस्व संकलन गर्ने नभई कर, आर्थिक प्रणालीलाई सहयोग पुर्‍याउने प्रणाली हो । स्वच्छ हिसाबले व्यवसाय गर्नेहरूको चाहना पनि झमेला एवं गलत ढंगले कारोबार नहोस् भन्ने हुन्छ । एउटा व्यवसायीले गलत गर्दा सिंगो व्यावसायिक क्षेत्र नै बदनाम हुने भएकाले निजीक्षेत्रको साथले भीसीटीएस प्रणाली कार्यान्वयनमा सफलता पाएका हौं ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि राजस्व अनुसन्धान विभाग सक्रिय बन्नुको कारण के हो ?
राजस्व चुहावट नियन्त्रण र विदेशी विनिमय अपचलन नियन्त्रण गर्न भन्दै विगतमा स्थापना गरिएको निकाय हो । विगतमा अर्थ मन्त्रालय मातहत हुँदा राजस्व अनुसन्धान विभागमा राजस्व संकलन गर्ने सम्बन्धित कानूनहरू भन्सार ऐन, मूल्य अभिवृद्धि ऐन, अन्तःशुल्क ऐनको अधिकार समेत त्यहाँ प्रत्यायोजन गरिएको थियो । यसले कर, भन्सार अधिकृतले गर्ने काम, छानबिनदेखि कर असुलीसम्मको काम गथ्र्यो । यसले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन प्रयोग गरेर छानबिन, अनुसन्धान गर्ने र अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने काम बिरलै गर्थ्यो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत यस विभागलाई ल्याउनुमा निश्चित आधारहरू छन् । प्रमुख कारण भनेको ‘फंग्सनल डुप्लिकेशन’ हो । एउटा निकायले प्रयोग गरेको अधिकार अर्को निकायले प्रयोग गरेको भन्दै आवाज उठेपछि काममा डुप्लिकेशन हटाउन यो निकायलाई अर्थ मन्त्रालयबाट अलग बनाइएको हो । राजस्व संकलन गर्ने निकाय र राजस्व बुझाउने कार्यमा संलग्न भएका व्यवसायी, कर मध्यस्थकर्ताहरू, भन्सार एजेन्ट, अडिटर्स र राजस्व संकलन गरेर बुझाएको ठीक छ/छैन भनेर छानबिन तथा परीक्षणको जिम्मा बोकेको निकायलाई अहिले डुप्लिकेशनबाट हटाइएपछि यसको प्रभावकारिता बढेको हो ।
अर्को कुरा, प्रधानमन्त्री मातहत आएपछि विभागीय अधिकारीहरूबीच स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य भएको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत आफै छानबिन, आफै निर्णय गर्ने जुन कामहरू भए, त्यसले पनि हिजोको दिनमा प्रभावकारिता ल्याएन । विज्ञहरूले विगतदेखि नै अर्थ मन्त्रालय मातहतभन्दा माथि राजस्व अनुसन्धानलाई राखेर काम गर्न दिनुपर्ने बताउँदै आएकाले त्यही सुझाव अनुसरण गरेरै अघि बढ्दा विभागको प्रभावकारिता बढेको हो । अहिले यो विभागलाई छानबिन तथा अनुसन्धानको जिम्मा दिइएको छ । यसको मिसिल सरकारी वकिलको कार्यालयमा जान्छ र सरकारी वकिलले कानून बमोजिम भए÷नभएको रुजु गरेपछि उसको राय सुझावमा अदालतमा मुद्दा अघि बढाइने गरिएको छ । अहिले निर्णय गर्ने अधिकार न्यायाधीशलाई भएकाले विभागमाथिको दृष्टिकोणमै परिवर्तन आएको छ । सन्तुलन र न्यायको सिद्धान्त हिजोको दिनमा कायम हुन नसकेकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि कायम भएको छ ।
प्रम मातहत आएपछिको यो अढाई वर्षको अवधिमा मुद्दा के कति चलाइएको छ ?
यो अढाई वर्षको अवधिमा राजस्व चुहावटको कसुरमा झण्डै ३४ अर्बको बिगो माग दाबी गरेर २२० ओटा मुद्दा चलाइएको छ । विदेशी विनिमय अपचलनको मुद्दामा १० अर्बभन्दा बढीको बिगो माग दाबी गरेर मुद्दा चलाएका छौं । सन्तुलन र न्यायको सिद्धान्त अनुरूप राजस्व अनुसन्धान विभागले काम गर्दा छलिएको राजस्व असुल हुने र आर्थिक अपराध गर्नेहरू दण्ड सजायको भागीदार हुने अवस्था छ । वास्तवमा नक्कली भ्याट बिल भनेको नक्कली नोटभन्दा सयौं गुणा ठूलो आर्थिक अपराध हो । १ करोडको बिल बनाएर कसैले दियो भने लिने मान्छेले राज्यले तिर्नुपर्ने करिब ४०–४२ लाख रुपैयाँ राजस्व छूट पाउँछ । यसबारे हामीले निर्मम ढंगले छानबिन अनुसन्धान गरिरहेका छौं । पहिले यस्ता क्रियाकलाप धेरै देखियो । विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएर सक्रिय भएपछि नियन्त्रणमा आएको छ । खासगरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा फर्म दर्ता गरेर भन्सारबाट सामान आयात गर्ने र त्यसैको आधारमा बिल बेच्ने काम विगतमा पनि भएको फेला पर्‍यो । अहिले पनि योजनाबद्ध हिसाबले कागजात मिलाएर कानूनको रीत पुर्‍याएर गरेको देखिएको छ । यसमा पनि आवश्यक अनुसन्धान तथा छानबिन बढाएका छौं ।
राजस्व छलीका घटनामा कर्मचारीको समेत मिलेमतो हुने गरेको विगतमा देखिने गरेको थियो । अहिले के छ ? यसलाई रोक्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
विगतमा कुनै एउटा भन्सारमा एक गाडी सामान आयात गर्दा एक/डेढ लाखभन्दा बढी राजस्व बुझाउने गरेका थिएनन् । हामीले छानबिन अनुसन्धान कारबाही अघि बढाएपछि न्यूनतम १० लाखदेखि ५० लाखसम्म राजस्व उठ्न थाल्यो । त्यही ढंगले सबैतिर सुधार भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा २०७५/७६ मा आयात ३० प्रतिशतले घट्दा राजस्व अघिल्लो ४ अर्ब ९० करोड असुल भएको छ भने अर्को वर्ष ११ अर्ब असुल भएको छ । हामीले गरेको काम कारबाही अनुसन्धानले गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराध गर्नेहरू निरुत्साहित भएका छन् भने राजस्व प्रणालीमै सुधार आएको छ । चुहावटमा संलग्न भएका कर्मचारीमाथि पनि हामीले मुद्दा दायार गरेका छौं । ११ जना कर्मचारीमाथि राजस्व चुहावट कसुरमा अहिले पनि मुद्दा दायर भइसकेको छ । कतिपय अनुसन्धानकै क्रममा छन् ।
राजस्व चुहावट शून्यमा कहीँ पनि झर्दैन, कहीँकतै चुहावटका घटना भइरहेका हुन्छन् । तर कर्मचारीको मिलेमतोमा राजस्व चुहावट हुन्छ कि भन्नेतर्फ विभाग चनाखो छ ।
राजस्व अनुसन्धानले आफ्नो कामकारबाही सक्रिय बनाइरहँदा अहिले नीतिगत रूपमा केही अप्ठ्यारो भोग्नुपरेको छ कि ?
नीतिगत रूपमा विगतदेखि नै केही कमीकमजोरी थिए । त्यसलाई सुधार गरेर हामीले सहज बनायौं । अहिले पनि केही अप्ठ्यारो आइहाले तत्कालै सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिने गरका छौं । संस्थागत, प्रणालीगत हिसाबले अझ विकास गर्न सुधारको काम चलिरहनेछ । शून्य सहनशीलतामा काम गर्ने वातावरण पाएका छौं । अरूबाट हाम्रो काममा हस्तक्षेप हुने अवस्था नभएकाले काम गर्न सहजै छ ।
अनुसन्धानको नाममा निजीक्षेत्रलाई दुःख दिने काम भयो भन्ने विगतदेखि नै सुनिँदै आएको छ । वास्तविकता के हो ?
विगतमा त्यस्तो भएको होला । तर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राजस्व अनुसन्धान आएपछि त्यस्तो दुःख दिने भन्ने छैन । विभागले पछिल्लो समय अनुगमनको काम अनलाइन प्रणालीबाटै गरिरहेको छ । कहीँ कतै गलत भए अनलाइनबाट थाहा हुन्छ । अनुसन्धान गर्ने गरेका छौं । अनावश्यक दुःख दिने नियत हाम्रो छैन । हामीले अहिले खासगरी कसैमाथि अनुसन्धान गर्नुअघि राजस्व छलीको प्रमाण खोज्छौं, सूचना हेर्छौं, सूक्ष्म रूपमा छानबिनपछि मात्रै व्यवसायीलाई डाकेर थप अनुसन्धान गर्ने गरेका छौं । प्रविधि अनुकूल अनुसन्धानलाई जोड दिएका छौं । निजीक्षेत्र लगानीमैत्री, उत्पादनमुखी भन्दै रोजगारी सृजनामा अघि बढ्नुपर्छ । त्यसमा हाम्रो समेत साथ सहयोग रहनेछ । यसैबाट स्वतः राजस्व आउँछ ।
विभागले दायर गरेका कतिपय मुद्दा अदालतले उल्ट्याइदिने समेत गरेको छ । विभागको अनुसन्धान क्षमता कमजोर भएर हो त ?
कहिलेकाहीँ प्रमाण जुटाएर विश्लेषण गर्ने क्रममा कमजोरी भएको हुन सक्छ । केही कुराहरू फरक पर्न सक्छ । तर हामीले सर्वोच्चसम्म लगेका मुद्दाहरू शतप्रतिशतसम्म सफल हुने खालका छन् । सूक्ष्म छानबिन गरेर अघि बढाइएका मुद्दा उल्टिनेछन् भन्ने विश्वास छैन । हामीसँग अनुसन्धान गर्न सक्षम कर्मचारी, प्रविधि छ । आगामी दिनमा पनि अनुसन्धान थप प्रभावकारी हुनेछ ।